သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်တွေကို အငြင်းမပွားပဲ အားပေးလိုက်ကြရအောင် . . . - SPORTS MYANMAR
သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံး အချိန်တွေကို အငြင်းမပွားပဲ အားပေးလိုက်ကြရအောင် . . .
ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို နဲ့ လီယွန်နယ် မက်ဆီ တို့ ဟာ ဥရောပ ဘောလုံး လောက ကို ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကျော် ကြာအောင် လွှမ်းမိုး ထားနိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ သူတို့ ၂ ဦး အကြား မှာ ရွှေဘောလုံး ဆု ၁၀ ဆု အထိ တူညီစွာ ရယူ ပိုင်ဆိုင် ထားကြ ပြီး အခြား ကလပ် နဲ့ တစ်ကိုယ်တော် ဆု ပေါင်း များစွာ ကိုလည်း ရယူ ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ ကြပါတယ် ။ ဒီလို နှစ်ပေါင်းများ စွာ အတူ တကွ အောင်မြင် လာခဲ့တာ ကြောင့်လည်း သူတို့ ၂ ဦး အကြားက ငြင်းခုန် မှုတွေ ဟာ ယနေ့ တိုင်အောင် မပြီးပြတ် နိုင် ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ရဲ့ ပရိသတ်တွေ က ရိုနယ်ဒို ဟာ မက်ဆီ လိုမျိုး ဘောလုံး အရည် အသွေး ကြွယ်ဝ သူ မဟုတ် ကြောင်း ၊ တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန် ပြီး မောက်မာ တတ်တဲ့ စိတ်ထား ရှိ ကြောင်း ၊ ပင်ကိုယ် ပါရမီ နည်းပါး သူ ဖြစ်ကြောင်း တွေကို ပြောဆို ထောက်ပြ တတ်ကြပါတယ် ။
ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ပရိသတ် တွေ ကလည်း သူတို့ရဲ့ ကစား သမား ဟာ ဘောလုံး သမား တွေ အကြားမှာ စံပြု ထိုက်တဲ့ သူမျိုး ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပြင်းထန် တဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှု တွေ ရဲ့ ပြယုဂ် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း နဲ့ မက်ဆီ ထက် ပိုပြီး မတူညီတဲ့ လိဂ်တွေ နဲ့ နိုင်ငံ အသင်းမှာ ပိုမို အောင်မြင် ထားကြောင်း တွေကို ပြန်လည် ထောက်ပြ ပြောဆို ခဲ့ကြ ပါတယ် ။
ယနေ့ အထိ သူတို့ ၂ ဦး အကြားက လွန်ဆွဲပွဲ ဟာ အပြတ် အသတ် သာလွန်ခြင်း မရှိ သေးဘဲ မက်ဆီ ရဲ့ ပရိသတ် အများ အပြား ဟာ ရိုနယ်ဒို စွမ်းဆောင် ခဲ့တာ တွေကို အသိ အမှတ် မပြု နိုင်ခဲ့ သလို ရိုနယ်ဒို ရဲ့ ပရိသတ် အများစု ဟာလည်း ဒီ အတိုင်းပဲ ဖြစ် နေခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ အချိန် မှာ ကစား သမားကြီး ၂ ဦး စလုံး ဟာ အသက် ၃၀ ကျော် ကို ရောက်ရှိ နေကြပြီ ဖြစ်ကာ ခြေစွမ်း နဲ့ ကြံ့ခိုင် မှု အနေ အထား တွေ ဟာ တဖြည်းဖြည်း ကျဆင်း လာခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကြားရက် မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေ မှာ ရိုနယ်ဒို မပါဝင် နိုင် ခဲ့သလို မက်ဆီ ကလည်း ဘာကာ အတွက် ၀င် ကစားပြီး ဒဏ်ရာ ရသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီ အချိန် မှာ တွစ်တာ အသုံးပြုသူ တစ်ဦး ရဲ့ မှတ်ချက် စကား ဟာ မက်ဆီ – ရိုနယ်ဒို ခေတ် အတွင်း အငြင်းပွား နေသူ တွေ အတွက် သတိပေး ခေါင်းလောင်း ထိုးသလို ဖြစ်စေ ခဲ့ ပါတယ် ။ “ခရစ္စတီယာနို ဟာ သူ့ရဲ့ ဘ၀ တစ်လျောက် နား ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ ထက် ပိုပြီး ပွဲတွေကို လွဲချော် လာခဲ့ ပြီ ။ မက်ဆီ ကလည်း သူ့ရဲ့ ဘ၀ တစ်လျောက် မှာ ဒဏ်ရာ ရခဲ့တာ တွေ ထက် ပိုပြီး ဒဏ်ရာ ရမှု တွေ ရှိ လာခဲ့ပါပြီ ။ ရောင်းရင်း တို့ . . . အဆုံးသတ် ချိန် ဟာ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ရောက် လို့ နေပါပြီ ။ ငြင်းခုန် နေတာ တွေ စကားနိုင် လုတာတွေ တော်လိုက်ပြီး သူတို့ရဲ့ အဆုံးသတ် အချိန် ကို ပျော်ပျော်ကြီး အားပေး လိုက်ကြရ အောင်” လို့ တွစ်တာ စာမျက်နှာ တစ်ခု မှာ ရေးသား ခဲ့တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ခရစ္စတီယာနို ရိုနယ်ဒို ဟာ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ မှာ ၃၅ နှစ် ပြည့် မြောက်တော့ မှာပါ ။ နောက် ထပ် ၄-၅ နှစ် ထပ်ပိုပြီး ကစားနိုင် ဖို့ မရှိ တော့ ပါဘူး ။ ပေါ်တူဂီ သားကြီး ကတော့ ဒီလို အချိန်တွေ မရောက်လာ ခင်တုန်းက သူ့ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှု ၊ အစား အစာ နဲ့ ကြွက်သား တည်ဆောက်မှု တွေ ကြောင့် အကောင်းဆုံး အဆင့်တွေ မှာ အနှစ် ၄၀ လောက် အထိ ကစားနိုင် မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ ဖူးပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ မှာတော့ ဒါတွေ ဟာ ထင်သလောက် မလွယ်ကူ ခဲ့ ပါဘူး ။
မက်ဆီ ဟာ ရိုနယ်ဒို ထက် ၂ နှစ် ငယ်ပါတယ် ။ ၃၂ နှစ် ကျော်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနား သားကြီး ဟာ ရိုနယ်ဒို လောက် ခြေစွမ်း ကျဆင်းသွား ခြင်းမျိုး မရှိ သေး ပေမယ့် ကြံ့ခိုင်မှု အနေ အထား မှာတော့ သိသိ သာသာကြီး ကျဆင်းသွားခဲ့ တာကို တွေ့မြင် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ကိုပါ အမေရိက အပြီး မှာ မက်ဆီ ဟာ ဒဏ်ရာ ကြောင့် နားနေ ခြ့ရပြီး ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ရာသီ အဖွင့် ပွဲတွေ ကို လွဲခဲ့ရ ပါတယ် ။
ပထမဆုံး ပွဲထွက် ကစားတဲ့ ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ပွဲမှာ လည်း ပထမ ပိုင်း အပြီး မှာတင် ဒဏ်ရာ ကြောင့် လူစားလဲ ခဲ့ရ ကာ အောက်တိုဘာ အလယ်လောက် အထိ ပြန်နား သွားရပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။ သေချာတာ ကတော့ မက်ဆီ ရော ရိုနယ်ဒို ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှစ် လောက်တုန်းက လို မဟုတ်တော့ ပါဘူး ။
ဘောလုံး ရာသီ တွေ က အမြဲ ရှိနေဦး မှာ ဖြစ်သလို ဘောလုံး ပွဲတွေ ကလည်း အမြဲ ရှိနေ ဦးမှာ ပါ ။ မက်ဆီ နဲ့ ရိုနယ်ဒို တို့ ကတော့ အမြဲ မရှိ နိုင်ပါဘူး ။ ဘောလုံး ဇာတ်ခုံ ပေါ်မှာ ၁၅ နှစ် နီးပါး အတူ အားပြိုင် ခဲ့ကြပြီး ဘောလုံး သမိုင်း တစ်လျောက် အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံး တွေအဖြစ် သတ်မှတ် ခံခဲ့ရတဲ့ သူတို့ ၂ ယောက် ဟာ လာမယ့် ရာသီ တွေ မှာ ပိုမို ကျဆင်း လာတာတွေ ကို တွေ့မြင် ကြရတော့ မှာ အသေအချာ ပါပဲ
ဒါကြောင့် သူတို့ ကစား နေသေးတဲ့ အချိန်တွေ မှာ ငြင်းခုန်တာတွေ လျော့ပြီး ပျော်ရွှင် ခံစား လိုက်ကြရအောင် လားဗျာ . . . . .
သူတို့ ၂ ယောကျရဲ့ နောကျဆုံး အခြိနျတှကေို အငွငျးမပှားပဲ အားပေးလိုကျကွရအောငျ . . .
ခရစ်စတီယာနို ရိုနယျဒို နဲ့ လီယှနျနယျ မကျဆီ တို့ ဟာ ဥရောပ ဘောလုံး လောက ကို ဆယျစုနှဈ တဈခု ကြျော ကွာအောငျ လှမျးမိုး ထားနိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ သူတို့ ၂ ဦး အကွား မှာ ရှဘေောလုံး ဆု ၁၀ ဆု အထိ တူညီစှာ ရယူ ပိုငျဆိုငျ ထားကွ ပွီး အခွား ကလပျ နဲ့ တဈကိုယျတျော ဆု ပေါငျး မြားစှာ ကိုလညျး ရယူ ပိုငျဆိုငျ ထားခဲ့ ကွပါတယျ ။ ဒီလို နှဈပေါငျးမြား စှာ အတူ တကှ အောငျမွငျ လာခဲ့တာ ကွောငျ့လညျး သူတို့ ၂ ဦး အကွားက ငွငျးခုနျ မှုတှေ ဟာ ယနေ့ တိုငျအောငျ မပွီးပွတျ နိုငျ ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။
မကျဆီ ရဲ့ ပရိသတျတှေ က ရိုနယျဒို ဟာ မကျဆီ လိုမြိုး ဘောလုံး အရညျ အသှေး ကွှယျဝ သူ မဟုတျ ကွောငျး ၊ တဈကိုယျကောငျး ဆနျ ပွီး မောကျမာ တတျတဲ့ စိတျထား ရှိ ကွောငျး ၊ ပငျကိုယျ ပါရမီ နညျးပါး သူ ဖွဈကွောငျး တှကေို ပွောဆို ထောကျပွ တတျကွပါတယျ ။
ရိုနယျဒို ရဲ့ ပရိသတျ တှေ ကလညျး သူတို့ရဲ့ ကစား သမား ဟာ ဘောလုံး သမား တှေ အကွားမှာ စံပွု ထိုကျတဲ့ သူမြိုး ဖွဈကွောငျး ၊ ပွငျးထနျ တဲ့ ကွိုးစား အားထုတျမှု တှေ ရဲ့ ပွယုဂျ တဈခု ဖွဈကွောငျး နဲ့ မကျဆီ ထကျ ပိုပွီး မတူညီတဲ့ လိဂျတှေ နဲ့ နိုငျငံ အသငျးမှာ ပိုမို အောငျမွငျ ထားကွောငျး တှကေို ပွနျလညျ ထောကျပွ ပွောဆို ခဲ့ကွ ပါတယျ ။
ယနေ့ အထိ သူတို့ ၂ ဦး အကွားက လှနျဆှဲပှဲ ဟာ အပွတျ အသတျ သာလှနျခွငျး မရှိ သေးဘဲ မကျဆီ ရဲ့ ပရိသတျ အမြား အပွား ဟာ ရိုနယျဒို စှမျးဆောငျ ခဲ့တာ တှကေို အသိ အမှတျ မပွု နိုငျခဲ့ သလို ရိုနယျဒို ရဲ့ ပရိသတျ အမြားစု ဟာလညျး ဒီ အတိုငျးပဲ ဖွဈ နခေဲ့ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ လကျရှိ အခြိနျ မှာ ကစား သမားကွီး ၂ ဦး စလုံး ဟာ အသကျ ၃၀ ကြျော ကို ရောကျရှိ နကွေပွီ ဖွဈကာ ခွစှေမျး နဲ့ ကွံ့ခိုငျ မှု အနေ အထား တှေ ဟာ တဖွညျးဖွညျး ကဆြငျး လာခဲ့ ပွီ ဖွဈ ပါတယျ ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ကွားရကျ မှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတှေ မှာ ရိုနယျဒို မပါဝငျ နိုငျ ခဲ့သလို မကျဆီ ကလညျး ဘာကာ အတှကျ ၀ငျ ကစားပွီး ဒဏျရာ ရသှားခဲ့ ပါတယျ ။
ဒီ အခြိနျ မှာ တှဈတာ အသုံးပွုသူ တဈဦး ရဲ့ မှတျခကျြ စကား ဟာ မကျဆီ – ရိုနယျဒို ခတျေ အတှငျး အငွငျးပှား နသေူ တှေ အတှကျ သတိပေး ခေါငျးလောငျး ထိုးသလို ဖွဈစေ ခဲ့ ပါတယျ ။ “ခရစ်စတီယာနို ဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝ တဈလြောကျ နား ခဲ့ရတဲ့ အခြိနျတှေ ထကျ ပိုပွီး ပှဲတှကေို လှဲခြျော လာခဲ့ ပွီ ။ မကျဆီ ကလညျး သူ့ရဲ့ ဘဝ တဈလြောကျ မှာ ဒဏျရာ ရခဲ့တာ တှေ ထကျ ပိုပွီး ဒဏျရာ ရမှု တှေ ရှိ လာခဲ့ပါပွီ ။ ရောငျးရငျး တို့ . . . အဆုံးသတျ ခြိနျ ဟာ တဖွညျးဖွညျး နဲ့ ရောကျ လို့ နပေါပွီ ။ ငွငျးခုနျ နတော တှေ စကားနိုငျ လုတာတှေ တျောလိုကျပွီး သူတို့ရဲ့ အဆုံးသတျ အခြိနျ ကို ပြျောပြျောကွီး အားပေး လိုကျကွရ အောငျ” လို့ တှဈတာ စာမကျြနှာ တဈခု မှာ ရေးသား ခဲ့တာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
ခရစ်စတီယာနို ရိုနယျဒို ဟာ လာမယျ့ ဖဖေျောဝါရီ မှာ ၃၅ နှဈ ပွညျ့ မွောကျတော့ မှာပါ ။ နောကျ ထပျ ၄-၅ နှဈ ထပျပိုပွီး ကစားနိုငျ ဖို့ မရှိ တော့ ပါဘူး ။ ပျေါတူဂီ သားကွီး ကတော့ ဒီလို အခြိနျတှေ မရောကျလာ ခငျတုနျးက သူ့ရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှု ၊ အစား အစာ နဲ့ ကွှကျသား တညျဆောကျမှု တှေ ကွောငျ့ အကောငျးဆုံး အဆငျ့တှေ မှာ အနှဈ ၄၀ လောကျ အထိ ကစားနိုငျ မယျလို့ မြှျောလငျ့ ထားကွောငျး ပွောဆိုခဲ့ ဖူးပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ လကျတှေ့ မှာတော့ ဒါတှေ ဟာ ထငျသလောကျ မလှယျကူ ခဲ့ ပါဘူး ။
မကျဆီ ဟာ ရိုနယျဒို ထကျ ၂ နှဈ ငယျပါတယျ ။ ၃၂ နှဈ ကြျောပွီ ဖွဈတဲ့ အာဂငျြတီးနား သားကွီး ဟာ ရိုနယျဒို လောကျ ခွစှေမျး ကဆြငျးသှား ခွငျးမြိုး မရှိ သေး ပမေယျ့ ကွံ့ခိုငျမှု အနေ အထား မှာတော့ သိသိ သာသာကွီး ကဆြငျးသှားခဲ့ တာကို တှမွေ့ငျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ကိုပါ အမရေိက အပွီး မှာ မကျဆီ ဟာ ဒဏျရာ ကွောငျ့ နားနေ ခွ့ရပွီး ဘာစီလိုနာ ရဲ့ ရာသီ အဖှငျ့ ပှဲတှေ ကို လှဲခဲ့ရ ပါတယျ ။
ပထမဆုံး ပှဲထှကျ ကစားတဲ့ ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ပှဲမှာ လညျး ပထမ ပိုငျး အပွီး မှာတငျ ဒဏျရာ ကွောငျ့ လူစားလဲ ခဲ့ရ ကာ အောကျတိုဘာ အလယျလောကျ အထိ ပွနျနား သှားရပွီ ဖွဈ ပါတယျ ။ သခြောတာ ကတော့ မကျဆီ ရော ရိုနယျဒို ပါ လှနျခဲ့တဲ့ ၄-၅ နှဈ လောကျတုနျးက လို မဟုတျတော့ ပါဘူး ။
ဘောလုံး ရာသီ တှေ က အမွဲ ရှိနဦေး မှာ ဖွဈသလို ဘောလုံး ပှဲတှေ ကလညျး အမွဲ ရှိနေ ဦးမှာ ပါ ။ မကျဆီ နဲ့ ရိုနယျဒို တို့ ကတော့ အမွဲ မရှိ နိုငျပါဘူး ။ ဘောလုံး ဇာတျခုံ ပျေါမှာ ၁၅ နှဈ နီးပါး အတူ အားပွိုငျ ခဲ့ကွပွီး ဘောလုံး သမိုငျး တဈလြောကျ အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံး တှအေဖွဈ သတျမှတျ ခံခဲ့ရတဲ့ သူတို့ ၂ ယောကျ ဟာ လာမယျ့ ရာသီ တှေ မှာ ပိုမို ကဆြငျး လာတာတှေ ကို တှမွေ့ငျ ကွရတော့ မှာ အသအေခြာ ပါပဲ
ဒါကွောငျ့ သူတို့ ကစား နသေေးတဲ့ အခြိနျတှေ မှာ ငွငျးခုနျတာတှေ လြော့ပွီး ပြျောရှငျ ခံစား လိုကျကွရအောငျ လားဗြာ . . . . .